Indawo yokugcina kaMorgan Stanley
Udidi: UMorgan Stanley
UMorgan Stanley wakha ukubonakaliswa kweBitcoin ngeGrayscale Bitcoin Trust
I-Behemoth yase-Melika ene-bhanki yaseMelika uMorgan Stanley uhlala eqinile ekufumaneni ukubonakaliswa kweBitcoin ngokutyala izigidi zeedola, ngaphandle kokungathandabuzeki okukhoyo phakathi kwabahlalutyi.
Umhlalutyi we-Twitter iMacroScope ukhankanye umahluko obalulekileyo phakathi kokufayilwa kwangaphambili kweziko lezemali kunye nedatha yanamhlanje, ephawula ukuba ukubonakaliswa kwebhanki ye-crypto kukhule kakhulu kwiinyanga nje ezimbalwa.
UMacroScope waxela kwangaphambili ukuba uMorgan Stanley wayeza kufuna ukubhengeza ngakumbi i-crypto xa ibambe izabelo ezingama-28.289 kuphela kwiGrayscale Bitcoin Trust (GBTC).
Ngokusekwe kwiifilitha ze-US zakutshanje, iMorgan Stanley Insight Fund, iMorgan Stanley Institutional Fund Inc, iMorgan Stanley Variable Insurance Fund Inc., kunye neMorgan Stanley Institutional Fund Trust benze lonke utyalomali ngqo lweBitcoin.
Utyalomali olungathanga ngqo lubhekisa kwezo zibonelela ngokuchaseneyo nemveliso yotyalo-mali ethi ilandele ukusebenza komnye. Ngenyanga edlulileyo, intengo yesabelo se-Morgan Stanley yatshintsha ngo- + XNUMX%.
Morgan Stanley ixabiso lembali e US dollar ukususela ngoku XNUMX
Olona tyalo mali luphezulu lubanjwe yinkampani luvela kwiNgxowa-mali kaMorgan Stanley Insight, ene-928,051 yezabelo ze-GBTC ezixabisa malunga ne-27.6 yezigidi zeedola. Nangona kunjalo, olu lutyalomali olukhulu lwemali yedijithali ngayo nayiphi na imethrikhi, iiakhawunti zokwenza iipesenti nje ezingama-0.34% yeeasethi zengxowa mali zizonke.
Iingxelo zamva nje zibonisa ukuba iimali zikaMorgan Stanley zinokuqhuba nolwabiwo oluphezulu lwe-25% yeeasethi zayo zizonke kwi-crypto.
Umdyarho wokutsala abona batyalo-mali batyekele kakhulu kwiibhanki nakumaziko emali aqiniswe ngo-2021, kulandela u-2020/2021 we-run run. Abatyali mali beziko elikhulu njengoJP Morgan, uGoldman Sachs, uBNY Mellon, kunye nabanye sele beqalisile ukubonelela ngotyalo-mali oluthe ngqo nolungathanga ngqo kunye nohlalutyo kubathengi abanomdla.
Kananjalo, amathandabuzo awayekade egubungele iBitcoin abonakala ngathi ayacoca njengoko amazwe azimeleyo ethatha amanyathelo okudibanisa iBitcoin kunye ne-cryptocurrency kwiziseko zophuhliso lwezezimali.
tags Bitcoin, Cryptocurrency, UMorgan Stanley, iindaba